Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Malta » Malta dia nanambara fanentanana ara-bola vaovao ho an'ny tsenan'ny MICE
Malta, archipelago mediteraneana, dia nanjary toerana mahasarika MICE (fihaonana, fandrisihana, fivoriambe, hetsika) ho an'ny tsena amerikana avaratra, miaraka amin'ireo toerana misy hetsika misy azy any ivelany sy mahavariana, fotodrafitrasa tena tsara ary tara-masoandro 300 mahery isan-taona.
Ny fizahantany Malta dia nandefa programa fandrisihana ho an'ny mpikarakara MICE ho an'ny hetsika natao tany Malta na ny nosy rahavavy Gozo.
Malta no toerana mety indrindra amin'ny fivoriana sy fitsangatsanganana ho an'ny fikambanana any Etazonia sy Kanada.
Ity programa fanomezana ity dia hanatsara ny drafitry ny hetsika aorian'ny Covid amin'ny alàlan'ny fanolorana mpanatrika toerana vaovao, tokana, mahaliana ary azo antoka.
Zava-dehibe indrindra ho an'ireto tsena ireto ny miteny Malta ny anglisy, manana fidirana amin'ny rivotra tsara, ary tsy mila visa ary mitaky vidiny kely kokoa noho ny toerana eoropeanina. Ankehitriny, ny Malta Tourism Authority (MTA) dia nandefa programa fandrisihana ho an'ny mpikarakara MICE ho an'ny hetsika natao tany Malta na ny nosy rahavavin'i Gozo miaraka amin'ny fanomezana hatramin'ny € 150 (eo ho eo amin'ny $ 160 USD).
Araka ny voalazan'i Christophe Berger, Tale, Con Convention Malta, "ny fifandraisan'i Malta amin'ireo seranam-piaramanidina eropeana lehibe miaraka amin'ny habaka ivelany, ny fiarovana ary ny tambajotran'antoka mpamatsy matihanina no antony sasany mahatonga an'i Malta ho toerana mety indrindra amin'ny fivoriana sy ny fivezivezena ho an'ny fikambanana monina any Etazonia sy Kanada. Matoky aho fa ny fandrisihana MICE Business vaovao dia ho tena manintona an'ireo fikambanana sy ny fihaonany ary ireo mpandrafitra hetsika amin'ny ezaka ataon'izy ireo hanamafisana ny drafitra Covid Event Plan amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mpanatrika toerana vaovao, tokana sy mahaliana ary azo antoka. ”
Fa maninona i Malta? Antony folo voalohany nisafidianan'ny mpikarakara MICE an'i Malta: